China Sheet nandrisika Sheet sy ny orinasa | Derunying
Takelaka mifono loko
Takelaka vy nandrendrika mafana
Sodina voahitsy mahitsy
Coil vy mihorona mafana
Famokarana takelaka mangatsiaka mihomehy
fampiharana: Kaontenera tsy misy tsindry na tanky fitehirizana.
Ny takelaka misokatra dia kofehy vy misy hateviny rehefa miala amin'ny ozinina izy, ary takelaka vy misy hateviny sy sakany voaforitra arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa. Ny takelaka fisaka voalohany dia mihodina amin'ny habe takian'ny fenitra nasionaly rehefa miala amin'ny orinasa izy. Amin'ny ankapobeny, ny takelaka voalohany dia misy refy henjana, fampisehoana tsara kokoa ary vidiny avo kokoa. Ny manokatra takelaka dia mora vidy ihany.
Ny hatevin'ny tontonana fisaka dia 1.5-20mm, ary ny fitaovana dia Q235 sy Q345. Rehefa vita ny tsy mipoitra, manaparitaka, manao habe ary manety, dia lasa takelaka fisaka misy ny halavany sy ny sakany takiana aminy. Izy io dia mety amin'ny fanodinana takelaka vita anaty hatsiaka, takelaka nohosorana, takelaka mifono loko, ary takelaka vy tsy misy fangarony.
Ny tombony dia ireto manaraka ireto
1. Ny vidiny dia mora ary ny lavany dia afaka manapa-kevitra malalaka;
2. Mety amin'ny fitaterana, na inona na inona haben'ny takelaka vy; Tena mety ihany koa ny mampiditra sy mamoaka kaontenera, ary azo antoka ihany koa mandritra ny fitaterana. Raha ampitahaina amin'ny coil galvanized dia manana fahamorana sy fiarovana lehibe izy io mandritra ny fitaterana
3. Mety ny fanapahana, ary azo esorina arakaraka ny tena filan'ny lovia vy ny habe;
4. Mitsitsia fitaovana amin'ny fomba mahomby. Ohatra, ny tanky fitahirizana dia mitaky takelaka vy 20 6800 × 1500 × 6. Ny takelaka vy amin'ny tsena amin'ny ankapobeny dia 6000, 8000 ary 9000 ny halavany. Raha takelaka vy vita amin'ny tsena no ampiasaina dia hisy ambim-bava kely. Miaraka amin'ny takelaka misokatra, ny takelaka vy 6900 dia azo ampiasaina mivantana, izay mitsitsy fitaovana, izay koa tombony lehibe indrindra. Indrindra ho an'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, ny vokatry ny fanangonam-bokatra sy ny fihenan'ny vidiny dia miharihary.
Fitaovana: SGCC, S350GD + Z, S550GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D
Zinc coating: 40-275G / M2
Spangles: tsy misy sponjy / spangles
Teknika: Mihodina mafana / Mangatsiaka mihodina
Fonosana: fenitra fanondranana entana
Fitsaboana ambonin'ny tany: misy menaka, tsy fitoviana na passive tsy misy chromium, passivation + misy menaka, passivation tsy misy chromium + voahosotra, mahazaka dian-tànana na tsy misy chromium mahatohitra ny dian-tànana.
Previous: Sodina mahitsy nohosorana
Manaraka: Coil vy mihorona mafana
Address: ROOM 301, TRANON'NY birao WEIRUN LINJIE, NO.30, LALAN'NY HUANGHE, LIAOCHENG ZON'NY FAMPANDROSOANA INDUSTRIANA avo lenta, faritany SHANGDONG